သင်ယူမှုကို ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်ပါနဲ့
Ko Andrew isasenior faculty member at EduGate Engineering School, teaching various computer application and concepts courses in face-to-face and online environments. He holdsaB.E in Marine Engineering from Myanmar Maritime University. Ko Andrew has more than four years of educational experience. He is currentlyaprincipal at EduGate Engineering School. He has also taught at Yangon Technological University(YTU) asaguest lecturer , as well as conducted personal training. Before teaching, he was project engineer at Plant Engineering Construction company and field engineer at Baker Hughes International Holding Co.ltd. He is one of the entrepreneurs of Online Education in Myanmar and currently working as the principal of EduGate Engineering Academy.
Learning is very important in our life!
Excellence (& education) isacontinous process. Not an accident. - Dr. APJ Kalam President of Bharat (India) (2002 to 2007)
AutoCAD for Civil Engineers Course Duration: 6months Online Course Fee: 50,000 Kyats
1.Solidworks Basic and Intermediate Course Duration: 3months Online Course Fee: 100,000 Kyats 2.Solidworks Advanced Course Duration 6months Online Course Fee: 150,000 Kyats For more information: Please go to this link-https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCO007ZitpCohaXSj0IA2rdWKsh0zs4bkVy
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ယနေ့လက်ရှိ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သင်တန်းများကို အဆင့်အမြင့်ဆုံး Online သင်တန်းများအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ Online အတန်းများကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများကတော့
၁။ ခရီးစရိတ်ကုန်ခြင်း၊ ကားပိတ်ခြင်း၊သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ကင်းဝေးပါမယ်။
၂။မိမိ အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ လေ့လာနိုင်လို့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ပျက်ခြင်း ကင်းဝေးပါမယ်။
၃။တစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြတဲ့ လမ်းညွှန်ရှင်းလင်းချက်များကြောင့် လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်မယ်။
၄။ အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ကိုယ် နားမလည်တာ၊ မေ့သွားတာတွေရှိရင်လည်း အရင်သင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ကြည့်လို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။
We offer the highest quality Online Trainings available in the world today, atafraction of the cost for conventional classroom training. Some of our many benefits: No travel, No Missed Work, Easy to Follow Step-By-Step Instruction, Convenient, and Self-Paced.
Plant Design and Piping Training Courses
Revit Architecture သင်တန်းများကို လစဉ် တန်းခွဲများဖွင့်လှစ်ပြီး သင်ကြားပေးနေပါတယ်။
Be the hero by capturing and sharing knowledge with your coworkers
အချိန်ကုန်၊လူပင်ပန်းသက်သာပြီး efficient ဖြစ်သော
E-Learning System ဖြင့် စာသင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော
Excel beginner and advanced course
Solidworks Advanced Course(Batch-5)
Teacher: Aung Kyaw
ဒီသင်တန်းကတော့ Solidworks Software ကို လုံးဝ အသစ်အဆန်းတစ်ခုလို စတင်သုံးစွဲခါစ userတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Course Design ကိုတော့ 3D Parametric Modeling အကြောင်း လျှင်မြန်စွာ စတင်သဘောပေါက်စေဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။
Online Course တက်စေစဉ် နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ Solidworks Use Interface ကို နားလည်သဘောပေါက်လာမယ်။ Sketch တွေ ဘယ်လို ဖန်တီးစမလဲဆိုတာသိလာမယ်။ Parametric Relationship တွေကို တည်ဆောက်နိုင်လာမယ်။ နောက်ပြီး 3D Model တွေကို စတင်ဖန်တီးကြည့်ကြမယ်။
ဒါတွေအပြင် Part တွေကိုပေါင်းစုပြီး Assembly တွေကို ဖန်တီးတဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေ၊ partနဲ့ assembly တွေနှစ်မျိုးလုံးအတွက် 2D Production Drawing တွေ ဘယ်လို ထုတ်မလဲဆိုတာ သင်ယူနိုင်မှာပါ။
Syllabus ကိုတော့ ဒီလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Solidworks Basic Skills Course+ Advanced Skills Course
သင်တန်းနှင့်ပတ်သတ်သော ရှင်းလင်းချက်များကို ဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Download ယူပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqCoHZizttgc4iaehbkpzhrVk6lm0BpKOk
Teacher: Nang Khumkham
READING AND LISTENING COURSE
Reading and Listening Skills များကောင်းမွန်စေရန် အဓိက ပြင်ဆင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး သင်ကြားမယ့် အတန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အင်္ဂလိပ်စာ ထူးချွန်ထက်မြက်ရေးကလည်း တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ ပါဝင်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဒီသင်တန်းကို ပညာဒါနအနေနဲ့ ဖွင့်လှစ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရေးအတွက် ကောင်းမွန်မယ့် စာအုပ်များစွာကိုလည်း သင်တန်းရဲ့ Resources Section မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ Download လုပ်ရန် မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့် သင်တန်း လိပ်စာ အတိုင်းလာရောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
နယ်မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးလည်း အခမဲ့ ၀င်ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက E-certificate လည်းပေးသွားပါမယ်။
Register မလုပ်ပဲ Guess Access နဲ့ ၀င်သူများကတော့ Password နံပတ် 81115ကိုသုံးပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
English Grammer Foundation Couse
We are very glad to get chance studying from elearning-myanmar wet site.
I am working as warehouse man, storekeeper in offshore industry. we need to improve our english.
So, I would like to request for study from yourelearning center.
English 4Skills - Level-2 (Pre-intermediate Class)
Teacher: Thura Min Htet
အင်္ဂလိပ်စာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံ သဒ္ဒါနဲ့ စာကြောင်းများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကို အဓိကထား သင်ကြားပေးတဲ့ Class ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုရေး၊မြန်မာလိုဘာသာပြန်နဲ့ ရေးသွားပေးပါမယ်။ သင်ရိုးညွှန်တမ်းနဲ့ မိမိဘာတွေ သင်ကြားရမလဲဆိုတဲ့ Syllabus ကိုတော့ ဒီလင့်ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သော နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါစေ။
Tekla Structure New Class Batch-9
Tekla Structure Course
20. Linking Files အစရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအတိုင်း သင်ကြားပေးသွားပါမယ်။
Prerequisite: AutoCAD Fundamentals, 3D, and Production Drafting
The objective of this course is to learn how to use the commands and functions in CADWorx Plant Professional to produce piping layout models. This course is designed to teach the operation of CADWorx Plant Professional which is widely used throughout the piping industries worldwide. You will gain skills needed to model 3D piping systems and produce the required Isometric and Orthographic drawings.
CADWorx Plant Professional user interface.
Setup rules and the configuration.
Building 3D piping models.
Routing 3D pipe.
Producing Isometric drawings.
Producing Orthographic drawings.
SmartPlant3D training in YTU
This training course is designed to learn advanced features of SP3D software.
This course is created for further improvement to learn SP3D after finishing the training in YTU.
PDMS for Plant Designers
Clash checking and configurable integrity checking rules helpadesigner create ‘right first time’ design and enable effective overall design quality assurance.
CADWorx P&ID Professional Course
The CADWorx P&ID Professional Course ကိုစတင် တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ ဒီအတန်းမှာ
-P&ID Components တွေကို ဘယ်လို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် ထည့်မလဲ
-CADWorx Blocksတွေ၊ Attributes တွေကို သုံးပြီး P&ID ကို ဖန်တီးနည်း
-ဒီDrawing ပုံကိုယူပြီး Database ထဲကို ထည့်တာ၊ Interlligent P&ID ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တာ
-Database နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ P&ID တစ်ခုကို ဖန်တီးနည်း
-နည်းလမ်း(၂)ခုလုံးကို Oil and Gas Industry မှာ အသုံးချပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်နည်းကို Productivity အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနိုင်အောင် Project Database ထဲကို နည်းလမ်း(၂)ခုထဲက ဘာနဲ့ထည့်ပြီး Data တွေကို ချိတ်ဆက်မလဲ စတာတွေကို သင်ပါမယ်။
ဒီ သင်တန်းက စဦးလေ့လာသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပေမယ့် အတွေအကြုံ ရှိသူများအတွက်လည်း လေ့လာဖို့ အကျိုးဖြစ်စေမယ့် ခေါင်းစဉ်တွေ များစွာ ၀ါဝင်ပါတယ်။
Intergraph Smartplant 3D is one of the most advanced plant design software offered in two decades that an Intergraph Process, Power & Marine's next-generation, data-centric, rule-driven solution for streamlining design processes and engineering while maintain data exists that it is reusable. This Hoshmand modeling software 3D, hasafull suite of complementary software has all the functionality needed to designaplant that provides for you. Intergraph Smartplant 3D is seeking to make changes in engineering and design. The software makes optimized design, increasing productivity and shortening project schedules and shortening time to market and profitability is increasing rapidly.
Great Features of SmartPlant 3D
Simple and user-friendly environment andamagical possibilities for complex tasks easily
The ability to share Trkh in real time, saving time and money
Increase design quality and better communication between engineering
Design effective management, reducing project schedules and costs
Ease of installation, setup and configuration, and tools to help administrators efficiently plan work
Ease of integration with other Intergraph products and third party applications
StaadPro Basic Training
ှုIntroduction to Revit Architecture
BIM 101-REVIT: INTRODUCTION TO REVIT
Gives an overview of BIM and Revit
Explains some of the terminology used throughout the course
Explains the different areas of the Revit interface
Shows how to change your view and use the different view tools in Revit
Teaches you how to create and edit Levels inarevit project
Shows how to createagrid to use asareference in your project
Explains how to create reference planes inaRevit Project
Starting the Project and Adding Levels
Shows how to beginanew revit project file, and create additional levels
Adds the reference planes to the project
Adds generic exterior walls to the project
Shows how to make modifications to the walls and wall properties
Adding the Interior walls
In this lesson, the interior walls are added to the project
Shows how to add foundation walls below the exterior walls
Shows how to add the first floor to the project
Adds the second floor to the building
Shows how to create the roof on the building
Shows how to create section views of the building model
Shows how to add doors to the building
Explains how to add and position windows in the project.
Addsastaircase and railings to the building
Shows how to change several of the front walls from generic to curtain walls
Adds Mullions to the curtain wall
Shows how to customize the roof
Customizing Walls - I
Shows how to customize the exterior walls and add layers
Customizing Walls - II
Finishes customizing the rest of the exterior walls of the building
This lesson finishes modifying the floors in the building.
Shows you how to createatoposurface or site for the project
Addsagrid and structural columns to the project
Addsafooting to the foundation walls and columns
Shows how to add model components and site components to the project
Explains how to section off and label rooms in the project
Floor Plans and Customizing Views
Shows how to customize 2D floor plan views
Explains how to create 3D perspective camera views of the building
Teaches you the basics of creatingarendering of the building
Explains how to create schedules for doors, windows, and rooms in the building information model
Shows the basics of creating sheets and plan sets from the building model
စာသင်ခန်းထဲမှာ ဘာကြောင့် ရှိနေရသလဲ။ ဒီဂရီဘွဲ့ရဖို့ လိုအပ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ကွန်ပျူ တာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ချင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ကို တစ်လှမ်းလောက်ဆုတ်လိုက်ရင် ပိုပြီး ကြီးကြီး မြင်ရတတ်တယ်။ တစ်လှမ်းလောက်ဆုတ်ပြီး မြင်ကြည့်လှည့်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ် နည်းပညာဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု တိုးတက်အောင်မြင်ရုံ အတွက် သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ဘူး။ လူမှု အဖွဲ့အစည်းမှာ အသက်ရှင် ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ လူသားအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေထက် သာလွန်တဲ့ ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာမျိုးလို့ ယူဆသင့်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့ဖူးကြပါတယ်။ ကောင်လေး(သို့)ကောင်မလေးလို့ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့ သူဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ လုပ်ပြီး အိပ်မက်လို့ ထင်ရတာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပြတယ်။ Transformer တို့ Spider-Man တို့လို ရုပ်ရှင်တွေဆိုရင် လူတွေ အကြိုက်များကြတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် Hero တစ်ယောက် အဖြစ် ထင်ဟပ်ပါဝင်လာစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ ပင်ကို ဗီဇမှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ အလုပ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်။ လူအများအတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ် ဆိုတာမျိုးကို လိုချင်နေတယ်။
နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုက ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကို လုပ်ဖို့၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေမယ့် ပရောဂျက်မျိုးတွေမှာ ပါဝင်ကူညီဖို့ ဂိတ်တံခါးတစ်ခုပါပဲ။ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ပါရမီ၊ သင့်ရဲ့ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေက မိမိ တစ်ကိုယ်စာ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းဖို့ထက် ပိုမို ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ ပညာဖြန့်ဝေမှု ၊ပညာနဲ့ အများကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ တွေးဆကြည့်စေလိုပါတယ်။
Technology in Action -12th Edition (Page:36)